Wiil Somali Ah oo Lagu Dilay Swedan – Radio Daljir
Maarso 7, 2016 2:57 b 0
Bacaadweyn, 07-March, 2016 -(Daljir)_Jimcihii la soo dhaafay ayaa la sheegay in Wiilkaasi oo 19-jir ahaa lagu tooreeyey Xarunta Magangelyo-doonka ee Qaxootiga oo ku taalla Degaanka Storå oo 200 KM dhanka Galbeed kaga toosan caasimadda dalkaasi ee Stocholm.
Wargeyska Thelocal.se ayaa qoray in Wiilkaasi tooreey looga dhuftay Luqunta, taasi oo keentay inuu ugu dambeyntii ugu geeriyoodo Isbitaalka.
Saddex nin oo da’doodu u dhexeyso 25 ilaa 30 jir ayaa la qabtay, kuwaasi oo lagu tuhunsanyahay dilkaasi.
Labo ka mid ah Eedeysanayaasha waxaa la qabtay markii ay Boliska soo gaareen Xaruntaasi
Eedeysanaha 3-aad ayaa la sheegay inuu u cararay duurka, balse wax yar kadib waa la qabtay, kadib, markii uu isku soo dhiibay Boliska ku sugan magaalladda Lindesberg oo laga maamulo Xarunta Qaxootiga Storå.
Afhayeenka Boliska Sweden, Stefen Wickberg ayaa u sheegay Wakaalladda Wararka TT inay baaritaanka wadaan, wuxuuna tilmaamay inay Xarumaha Qaxootiga mushkilad ku noqdeen Boliska, oo ay mar kasta ka dhacaan dagaalo iyo jahwareer.
Wasiirka Socdaalka ee Sweden, Morgan Johansson waxa uu dilkaasi ku tilmaamay Fal naxdin leh, wuxuuna sheegay inuu si dhow ula socon horumarka laga gaarO Baaritaankaasi.
Si kastaba ha ahaatee, waa Weerarkii 3-aad ee sababa dhimasho ee sannadkan ka dhacay Xarumaha Sweden ee lagu hayo Qaxootiga Magangelyo-doonka ah.
Barnaamijyada 190 Uncategorized 9789
Qaxootiga Afrikaanka ah ee ku Sugan Giriigga oo Xaaladooda laga Dayrinayo